Warar | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha | Page 10
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aden Ibraahim Farketi iyo Wafti balaaran oo ka mid ah Hayadaha lacagta dalka, Gudiga maaliyadda u qaabilsan Barlamanka, La taliyayaala ka kala socda Wasarada Maaliyadda iyo Bangiga Dhexe ayaa ka qayb galay shirkii sanadlaha ahaa ee Hay’adda Sanduuqa Caalamiga ee Aduunka IMF iyo Bangiga Aduunka. Shirkan sanadlaha ayaa waxaa isugu yimaada wakiilo ka ...
Mogadishu, 16 April 2016 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Somalia iyo Sudan oo Heshiis Iskaashi ah wada saxiixday, Golaha Ammaanka ee QM oo xoojinaya taageerada Soomaaliya, Ciidamada Puntland oo soo qabtay 15 maleeshiyada Al-Shabaab, Madaxweynaha ...
Wasiiradda Arrimaha dibedda ee Islaamka oo ka wada hadlay Xaalladda Somalia
Shirweyne xilliyeedka 13-aad ee Wasiiradda Arrimaha Dibedda ee dalalka Islaamka ayaa shalay ka furmay magaalladda Istanbul ee dalka Turkiga. Xoghayaha Guud ee Ururka Iskaashiga Islaamka, Dr. Iyaad Bin Amiin Madami oo ka hadlay Furitaanka Shirkaasi ayaa ku booriyey Wasiiradda inay diiradda saaraan dhibaatooyinka haysta dalalka Islaamka, gaar ahaan Somalia, Syria, Libya, Yemen, Falastiin iyo Afganistan, La-dagaalanka Argagixisadda, Islaam-nacaybka iyo dhibaatadda haysata ...
Wargeyska ugu akhriska badan Uganda ee The Monitor ayaa maanta daabacay inay Ciiddanka Boliska adkeeyeen Ammaanka Bariga dalkaasi iyo Xarumaha muhiimka, iyadoo ay soo baxeen Digniino sheegayo inay Alshabaab qorsheynayaan inay weerar ka geystaan Degmadda Mabale. Digniinta Alshabaab ayaa la sheegay in lagu soo daabacay Waraaqo la sheegay in Nin watay Mootadda uu bishan April 4-dii ku daadiyey Saldhigga Dhexe ...
Baxrayn oo Alshabaab iyo Alitixaad Islaamiyah u aqoonsatay Kooxo Argagixiso.
Golaha Wasiiradda ee dalka Baxrayn ayaa yeeshay Kulan ay kaga arrinsanayeen Kooxaha Hubeysan ee Maxaliga, kuwa Heer Gobaleedka iyo kuwa Heerka Caalamiga, waxayna shaaciyeen inay 68 Ururo iyo Kooxo Islaami ah u aqoonsadeen Kooxaha Argagixisadda. Boqorka dalkaasi, Khaliifa Bin Salamaan Al-khaliifa ayaa guddoomiyey Shirkaasi oo lagu qabtay Qasriga Alqadiibah oo ku yaalla caasimadda dalkaasi ee Manama. Warbaahinta dalkaasi iyo kuwa ...
Google oo xaqiijisay inay Internetka ka saareen Muuqaalkii Video-ga ee Alshabaab ka diyaariyeen weerarkii Ceel-cadde.
Dagaalamayaasha Alshabaab waxay mar sii horreysay Aaladda Internetka, gaar ahaan Baraha Bulshadda ku baahiyeen Muuqaal Video oo ay ka diyaariyeen weerarkii ay baretamihii bishii Janaayo ee sannadkan ku qaadeen Ciiddamo Kenyan oo ku sugnaa Xeradda Ceel-cadde ee Gobalka Gedo. Muuqaalkaasi oo muddo 50 daqiiqo soconayo ayaa lagu soo bandhigay Khasaarihii weerarkaasi, gaar ahaan Askarta Kenyanka ee lagu dilay Xeradaasi. Haddaba ...
Ciiddanka Badda ee Talyaaniga iyo Liibiya oo badbaadiyey Tahriibayaal
Ciiddanka Badda ee dalalka Libya iyo Talyaaniga waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen Tahriibayaal ku safrayey doonyo alwaax iyo kuwa la buufiyey, oo ku sii jeeday Xeebaha dalka Talyaaniga. Kolonel Ashraf Albadri oo ka tirsan Ilaaladda Xeebaha Libya ayaa sheegay inay shalay badbaadiyeen 155 Tahriibayaal Afrikaan ah, kuwaasi oo ay ka ciladowday doonidii ay ku safrayeen. Waxa uu tilmaamay inay u ...
QM oo ka hadashay dadka ku macluulsan Puntland iyo Somaliland
Hay’addaha UNICEF iyo WFP oo ka tirsan Hay’aaddaha hoos taga QM ayaa tilmaamay inay kordhiyeen taageeradda ay gaarsiinayaan Mujtamcyadda ay dhibaatooyinka ka soo gaareen Abaaraha iyo Elnino eek u nool Waqooyiga Somalia. Hadal qoraal oo uu Wakiilka UNICEF ee u qaabilsan Arrimaha Somalia, Steven Lauwerier ka soo saaray magaalladda Nairobi ayuu ka digay inay Kumanaan carruur ah khatar ugu jiraan ...
(Sawir + Faahfaahin): Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Xamar-weyne
Gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa ayaa waxa duhurnimaddii maanta lala beegsaday Maqaayad ku taalla dhabarka dambe ee Dhismaha Maamulka Gobalka Banaadir (Ufficio Governo) ee Degmadda Xamar-weyne ee magaalladda Muqdisho. Qaraxaasi oo ka dhacay Maqaayadda Alhindi ayaa waxaa ku geeriyootay 5 qof, iyadoo 7 kalena ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhamaantooda rayid ahaa. Afhayeenka Maamulka Gobalka bnaadir, C/fataax Cumar Xalane ayaa Saxaafadda ...
Xogta War-murtiyeedka Madasha Wada-tashiga Qaranka & Jadwalka Doorashooyinka.
Madaxda Qaranka iyo Maamul-gobaleedyadda ee ku mideysan Madasha Wada-tashiga Qaranka (The National Leadership Forum) ayaa la filayaa sida uu qorshuhu yahay inay Duhurnimadda maanta soo wada saaraan War-murtiyeed ay ku mideysan yihiin oo lagu xusi doono qoddobadda ay Isafgaradka ka gaareen. Madaxda ayaa la filayaa inay maanta soo gebagebeeyaan Shirkooda u furmay shalay, waxaase laga yaabaa in hal maalin oo ...